Ixabiso eliphantsi lobushushu beNkunkuma kunye neFurementation yokuxuba abaXhasi beTanki kunye neFektri | YiZheng
Yintoni iTank Fermentation Tank?
Ubushushu obuphezulu Inkunkuma & umgquba Ukuvunda Itanki ikakhulu yenza ubushushu obuphezulu bokuvutshelwa kwe-aerobic yemfuyo kunye nomgquba weenkuku, inkunkuma yasekhitshini, udaka kunye nenye inkunkuma ngokusebenzisa umsebenzi wee-microorganisms ukufezekisa unyango lwelindle olumanyanisiweyo olungenabungozi, luzinzile, lucuthwe kwaye luxhaswa.
Isebenza njani iTanki yeNkunkuma noMgquba？
Kuqala, beka izinto eziza kubiliswa kwi Inkunkuma & umgquba Ukuvunda Itanki ukusuka kwizibuko lokondla ngokuhambisa ibhanti. Ngelixa ubeka izinto, qalisa injini ephambili, kwaye isinciphisi sesantya semoto siqhuba ishafti ephambili ukuqala ukudibanisa. Kwangelo xesha, iincakuba ezijikelezayo kwishafti evuselelayo ziguqula izixhobo zezilwanyana ngaphezulu, ukuze izinto ziqhakamshelane ngokupheleleyo nomoya, ukuze izixhobo zokuvundiswa ziqale ukwenza ukubila kwe-aerobic.
Okwesibini, inkqubo yokufudumeza intonga yokufudumeza yombane emazantsi ilawulwa yibhokisi yombane ukuqala ukufudumeza ioyile yokuhambisa ubushushu kwindawo yokudlala yomzimba. Ngelixa kufudunyezwa, iqondo lobushushu lomzimba we-fermenter lilawulwa yimvakalelo yeqondo lobushushu ukulawula ubushushu be-fermenter kwisikhululo se-fermentation. Isimo esifunekayo. Emva kokuba ukubila kwento kugqityiwe, loo nto ikhutshelwa ngaphandle kwetanki kwinyathelo elilandelayo.
Ubume be Inkunkuma & umgquba Ukuvunda Itanki lungohlulwa lube:
1. Inkqubo yokondla
2. Inkqubo yokuvundisa itanki
3. Inkqubo yokuxuba amandla
4. Inkqubo yokukhupha
5. Ubushushu kunye nenkqubo yokulondolozwa kobushushu
6. Inxalenye yesondlo
7. Inkqubo yokulawula umbane ngokuzenzekelayo
Izinto eziluncedo zeNkunkuma kunye noMgquba weMbila yokuXuba iTanki
(1) Izixhobo zincinci ngobukhulu, zinokufakwa ngaphandle, kwaye azifuni sakhiwo somzi-mveliso. Yifektri yokuqhubekeka kweselfowuni, esombulula ingxaki yeendleko eziphezulu zokwakha izityalo, ukuthuthwa kwemigama emide kunye nokulungiswa okuphakathi
(2) Unyango olutywiniweyo, ukususwa kwempahla kwi-99%, ngaphandle kongcoliseko;
(3) Ukugquma kakuhle kwe-thermal, kungasikelwanga mda lixesha elibandayo, kunokuvundiswa ngesiqhelo kwindalo engaphantsi kwe-20 degrees Celsius;
(4) Izinto ezilungileyo zoomatshini, sombulula ingxaki ye-asidi eyomeleleyo kunye nokubola kwe-alkali, ubomi benkonzo ende;
(5) Ukusebenza ngokulula kunye nolawulo, izinto ezifakwayo ezinje ngomgquba wezilwanyana, ngokuzenzekelayo zivelisa isichumiso sendalo, kulula ukufunda nokusebenza;
(6) Umjikelo wokuvumba umalunga neeyure ezingama-24-48, kwaye amandla okulungisa anokunyuswa ngokweemfuno.
(7) Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, kunciphisa kakhulu iindleko zokuvelisa umbane;
(8) Iintlobo zeAerobic zinokuphila kwaye zivelise ngo -25 ℃ -80 ℃. Iibhaktheriya eziluncedo ezenziweyo zinokubulala iintsholongwane eziyingozi kwizixhobo ezingaxutywanga. Eli nqaku lenza ukuba ezinye izichumiso eziphilayo zingalingani kwaye nangaphaya.
Inkunkuma & umgquba Ukuvunda Ukuxubusha iTanki yeVidiyo
Inkunkuma & umgquba Ukuvunda Ukuxuba iTank Model
Ubungakanani besixhobo: L * W * H）
＞ 10m³ (umthamo wamanzi)
＞ 20m³ (umthamo wamanzi)
＞ 30m³ (umthamo wamanzi)
Izixhobo zokwenza isiguquli somoya
Iseti yeenkqubo ezizenzekelayo zolawulo
Egqithileyo Ukuphakamisa i-Hydraulic Composting Turner
Okulandelayo: Uhlobo lwevili lokuGaya umatshini wokujika